मम्मीले झै अर्की बिहे त गर्नुहुन्ननी ? साउदीमा अस्पतालको विस्तारामा रहेका बुबालाई बिनिताको प्रश्न – Khabar Patrika Np
मम्मीले झै अर्की बिहे त गर्नुहुन्ननी ? साउदीमा अस्पतालको विस्तारामा रहेका बुबालाई बिनिताको प्रश्न
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ०४, २०७८ समय: ९:२९:२१
अर्की मम्मी बिहे त गर्नुहुन्ननी ? गुल्मीकी बिनिता कुमालले जिटिभिले लिएको एक भिडियोमा आफ्नो बुबालाई प्रश्न गरेकी छिन् । उता बाट बाबुले गर्दिन भन्ने उत्तर दिन्छन् । ३ वर्ष अगाडी रोजगारीका लागि साउदी अरब गएका विनिताका बुबा भोजराज कुमालले काम गर्ने क्रममा मेसिनमा प’रेपछि दुवै खु”ट्टा गु”मा”उ”न पुगे ।
ईस्मा गाउँपालिकाका कुमालले विदेशमा धन कमाएर श्रीमती र छोराछोरीलाई सुखमा राख्ने सपना बु’ने’का थिए । सुरुमै भनेजस्तो काम र कमाई नभएपनि जसो तसो घर परिवार र परिवार सम्झेर काम गरिरहेका उनको जीवनमा निकै ठुलो ब”ज्र”पा”त आईलाग्यो । कम्पनीमा काम गर्दै गर्दा मेसिनमा परेका उनले गरिखाने दुबै खु”ट्टा गु’मा’ए । असख्यं सपना बोकेर परदेशीएका उनका सपना त पुरा हुन पाएनन् नै लामो समय अस्पतालमै बस्नु पर्यो ।
त्यसयता उनले यता नेपालमा जीवनसगींनीको साथ पनि गु”मा”ए । उनकी श्रीमती अर्कैसगं बिहे गरेर गईन् । एक छोरा र छोरी रहेका भोजराजलाई झनै चि”न्ताले स’ता’यो । पैसा कमाउन विदेशमा पुगेका कुमालले नत पैसा कमाउन सके नत आफु सकुसल रहन सके । विगत ८ महिनादेखि उनी उपचाररत छन् । केवल सहयोगीहरुको साहारामा अहिले साउदीको एक हस्पिटलमा जिवन गु’जा’री’रहेका छन् । उनका आमा बाबा बृद्ध भईसके ।
श्रीमतीले पनि छोडेर अर्कै संग विहे गरेपछि ससाना नानिबाबुको वि”च”ल्ली भएको छ । एता बुढा बा आमाको बस्ने घर छैन बाटोको छेउमा कसैको भ”त्कि”न लागेको घरमा यो परिवार बस्दै आएका छन । पैसा कमाउन विदेश पुगेका भोजराज करिब ८ महिना देखी हस्पीटलमा छन । परिवारमा आर्थीक अभावको कारण नेपालमा भोका छोरा छोरी बाबाको प्रतिक्षामा छ् । तर बाबा भने हस्पिटलमा मृ”त्यु संग ल”डे”रहेका छन् ।